ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတား ရှိ ငှားရန် ** Yadanar Myaing Condo For Rent In Kyauktada Township.,**, ကွန်ဒို | ShweProperty.com
ငှားရန် - ကွန်ဒို - ** Yadanar Myaing Condo For Rent In Kyauktada Township.,**
* Price - 8 Lakhs Per Month * Living area : 1450 sqft * Includes; - 1 Master bedroom,2Normal bedroos - (4) numbers of air-cons are already installed - (3) bathrooms - Parquet, Living room, dining room, Kitchen * Others Amenities; - Rooms have air conditioners with windows for maximum natural lights - Car Parking - Lift - 24/7 Security * Cause of situated in fair and good place. * Located in Kyauktada Township. *Has very good transportation options and it is only takeafew minutes away from Shopping Malls and schools.
Property ID: S-1186149
အိမ်ခြံမြေ အမည် : ** Yadanar Myaing Condo For Rent In Kyauktada Township.,**
Yadanar Myaing Condo
CRA-718, အိုလံပစ်တာဝါတွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-716, ပန်းဆိုးတန်း Business Tower တွင် အကျယ်(1500sqft) ရှိ အခန်း အမြန်ငှားမည်။
Naing Group Tower II
CRA-700, AMBO Tower တွင် အကျယ်(2336sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-635, MGW Tower တွင် အကျယ်(2500sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-542, AMBO Tower တွင် အကျယ်(2336sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ ဌားရန်ရှိသော ကွန်ဒိုအခန်း (Malihku Real Estate)
CRA-574, Naing Group Tower တွင် အကျယ်(1500sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-526, ပန်းဆိုးတန်း Business Tower တွင် အကျယ်(1500sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-524, အိုလံပစ်တာဝါတွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
Code-7568 ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် ဓာတ်လှေကားပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုအခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
CRA-388, City Shine Condo တွင် အကျယ်(25x55) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-312, အိုလံပစ်တာဝါတွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-310, ပန်းဆိုးတန်း Business Tower တွင် အကျယ်(1500sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-292, ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(25x60) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-290, AMBO Tower တွင် အကျယ်(2336sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-171, Shine Condo တွင် အကျယ်(30x40) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
Shweproperty ID: S-1186149
ကျောက်တံတား | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Mobile 095148486, 09785148486
Office no: 019317833